The akasununguka paIndaneti basa. Concrete masitepisi yakananga
Kukarukureta netwumatanda masitepisi kubva kongiri
mufanidzo Dzose 1: 0.25 0.5 1 1.5 2 3 4
manera kukwirira Y
Kureba manera X
Kureba platforms A
Pakukora of Pedhi B
General ukobvu Z
matanho protrusion F
Pakukora nhanho G
The dhayamita pakati vharuvhu D
Akaomerera valves pachikuva K
Batsirai pamusoro pakuverenga achirurama manera kubva kongiri
nezvemarudzi maviri kuvakwa muzvikamu zvinogona kusarudzwa muna kukarukureta.
Notation Kukura monolithic kongiri masitepisi
Miganhu vari millimeters.
X - Kureba manera
W - Upamhi masitepisi.
A - Kureba platforms. Kana magadzirirwo wako haripi manera playground, akaisa kureba pachikuva = 0.
В - Pakukora pamusoro Pedhi.
Z - Zvimwe ukobvu. Kufungwa chete ainakidza mhando manera.
F - The fungidziro nzendo.
G - Pakukora matanho. Munguva dzekare manyorerwo manera rinoshandiswa sezvo pakukora ari protrusion F.
Chisimbiso monolithic masitepisi.
Chisimbiso ari yaiwanzoshandiswa chete mhando 1 monolithic masitepisi.
Zvisinei, zvose kunobva ramunoda.